यी हुन् स्लिम बन्ने ७ उपाय – Jagaran Nepal
यी हुन् स्लिम बन्ने ७ उपाय
बिहान उठ्नेबित्तिकै एक वा दुई गिलास सादा पानी पिउनुहोस्। अनुसन्धानले नै प्रमाणित गरेको छ कि बिहानै पानी पिउनाले शरीरबाट विषाक्त पदार्थ हटाउन मद्दत गर्छ। पानीमा कुनै क्यालोरी पनि हुँदैन भने यसले भोक मेटाउन र अनावश्यक क्यालोरी खानबाट पनि बचाउँछ।
१. पर्याप्त पानी पिउनुहोस्
२. खाना खाएपछि केहीबेर हिँड्नुहोस्
३. बढी फाइवर भएका खानेकुरा खानुहोस्
फाइवर भएका खानेकुरा चपाउन बढी समय लाग्छ। जसले गर्दा हामीलाई पेट टन्न हुनुअघि नै अघाएको अनुभूति हुन्छ। उच्च फाइवर भएका खानेकुराहरू कम इनर्जी संकलन हुन्छ। यसको अर्थ उत्तिकै आयतन भएका खानाको कम क्यालोरी जम्मा हुनु हो।
त्यसकारण दिनको सुरुवात नै बढी फाइवर भएका खानेकुरा (खाजा) खाएर गर्नु राम्रो हुन्ण्छ। त्यसका लागि गहुँको आँटा, च्याँख्ला जस्ता चिजको खाजा बनाउन सकिन्छ। यसका साथै प्रत्येक खानामा ताजा मौसमी सलाद र सागपात समावेश गर्नुहोस्।
४. घरकै खाना खानुहोस्
५. नुनको प्रयोग सक्दो कम गर्नुहोस्
७. पुसअप र स्कवाट्स